Kufuneka ubenayo: Ipakethi enkulu yezinto zeKrisimesi nge- $ 19 | Izidalwa ezikwi-Intanethi
UManuel Ramirez | | Imifanekiso, Izibonelelo, Ikhathuni vector
Sibuya nomnye wale miqulu yeKrisimesi onokuyonwabela kunye nokwandisa izixhobo zakho ukuze ukwazi ukwenza amakhadi emibuliso yeKrisimesi, ukuthumela amakhadi eposi okanye ukuhombisa indlu yakho ngezo DIY. Ngoku sinezinto ezingaphezu kwe-1.800 zeKrisimesi uyilo lwakho nge $ 19 kuphela.
Ewe njengokuba uyifunda. Okunye kwezi zibonelelo ezingenakubuyiselwa Ngayo ukwandisa umxholo onxulumene neKrisimesi kwaye oko kuyakuvumela ukuba ubhetyebhetye xa kufikwa ekunikezeleni uhlahlo-lwabiwo mali kubathengi abahlukeneyo. Ukuba ungomnye wabo bahlala bejonga ubomi, azikho ezininzi iidola ezili-19 ukwenza isipho somahluko omkhulu kulowo umthandayo, ke qhubeka!
Thenga inyanda apha ngeedola ezili-19 kuphela
1 Iphakethe enkulu yomgangatho omkhulu
2 Imvelaphi yevolonti entle engenamthungo
3 Izikhova zeKrisimesi kwiPNG
4 Ukucwangciswa kwe-Lightroom okungama-620
6 Imvelaphi yeKrismesi engama-260
7 Amacwecwe eKrisimesi ali-100
8 Imithi emincinci engama-25 yeKrisimesi
9 I-PSD yeKrisimesi eyahlukileyo
10 Iikhephu zekhephu ezingama-24
11 Iikhephu zegolide ezingama-24
12 Grunge kunye nekrisimesi yentsimbi
13 Amaqhekeza ekhephu ahlukeneyo
Iphakethe enkulu yomgangatho omkhulu
Ngaphambi kokuba uqhubeke nokuqaqambisa umxholo ngamnye oza kuwufumana kule phakheji, kufuneka sitsho ukuba uninzi lwayo imizobo kunye nemifanekiso zikumgangatho obalaseleyo. Oko kukuthi, bakumgangatho olindelweyo namhlanje kwikhadi lombuliso leKrisimesi elenziwe ngo-2018 ukuya ku-2019.
Yinto repertoire phantse engenasiphelo Ukuqokelela zonke iintlobo zeendidi ngaphakathi kweKrisimesi. Imifanekiso kaSanta Claus, imithi yeKrisimesi, ukuskiya ekhephini, imizekeliso, izilwanyana eziqhelekileyo zale mihla ezinje nge-reindeer okanye ezo foto zeebhokisi zezipho zinikezelwe kakuhle kwaye zinokukunceda ukuba ubonakale kunxibelelwano lwasentlalweni.
Yiyo iphakethe yekrisimesi phantse ngokungenasiphelo kwaye ngubani ongaswele nto. Umxholo wayo ubalasele:
Imifanekiso engama-20 yevektha.
Imifanekiso eli-10 kwifomathi yePNG enemvelaphi ebonakalayo.
Izinto ze-PSD ezingama-36.
Iiflukhwe ezingama-408 kwifomathi yePNG enemvelaphi ebonakalayo
Imvelaphi engama-260 enemvelaphi ebonakalayo (xolela ukungafuneki).
Maleko angama-450 anemvelaphi esekuhleni.
Ukucwangciswa kwangaphambili kwe-Lightroom eyi-620 ukuphucula zonke iifoto zeKrisimesi esinazo.
Imvelaphi yevolonti entle engenamthungo
Into emayithethwe ngale mvelaphi icacileyo kwifomathi yevektha ngenye indlela yoyilo kwaye yahluke kakhulu. Ukuba ufuna ukwenza iphepha lakho lokusonga, yenza ikhadi leKrisimesi okanye iphepha lodonga indawo ethile yendlu yakho ngephepha, le mizobo yevektri ingaphezulu kokugqibeleleyo.
Uyilo lolunye uhlobo kwaye umbala ogqwesileyo upinki. Ikwahlula ngokugqibeleleyo loo mithi yeKrisimesi kunye nezo nkwenkwezi zibenza phantse bayile ngokukodwa. Ukuba ufuna ukwahluka kwaye wenze umxhasi wakho amangaliswe ngulo touch libalulekileyo, le pakethi yemifanekiso kwii vectors yeyona ilungileyo kule pack.
Le pakethi ifumaneka kwimvelaphi ebonakalayo I-AI, i-EPS kunye nefomathi ye-SVG; Ngamanye amagama, banokubangela ubuncinci bokulayisha ubunzima kubungakanani bewebhusayithi yakho ukuba uyazi ukuba uyilayisha njani ifomathi yevector phantse yeekilobytes.
Izikhova zeKrisimesi kwiPNG
Eminye yemixholo eyahlukileyo kule pakethi yeyezikhova zeKrisimesi. Uthotho lweenciniba zesikhova esizifumana kuzo zonke iintlobo ze yima ngamehlo asondelelene kakhulu. Ungabathatha kulo naluphi na uhlobo lweenjongo ukuze babe ngabalinganiswa abaphambili.
Kukho ezo Umnqwazi weKrisimesi, onamaphiko ezingelosi, Ngeempondo zenyamakazi okanye ngenye ikepusi yezo zisusa ingqele ezindlebeni zakhe. Uyakwazi ukubadibanisa kwezona zinto zibalulekileyo ukuze babe ngumzekeliso omnandi kunye nomzobo ononophelo.
Xa zizonke zikho iikholeji ezili-10 zeefucu zefomathi zePNG ezinemvelaphi ebonakalayo ebonakalayo ukwazi ukusebenza nabo kwi-Photoshop okanye ezo nkqubo zoMdibaniso ziba nempumelelo engaka. Siyakukhumbuza ukuba le pakethi yezikhova ibandakanya ezona zinto zichazayo ebusweni babo. Oko kukuthi, amehlo abo, imilomo kunye nezo zinto zokuhombisa iimpahla zabo ukuze "uzenzele" izikhova zakho.
Ukucwangciswa kwe-Lightroom okungama-620
Igumbi lokukhanyisa linalo ube yinkqubo ebalulekileyo yokuphinda ubambe ifoto. Kwaye nangona singadla inxenye yexesha lobomi bethu ngokwenza ezi seto zisetwa kuqala ukufumana zonke iintlobo zeziphumo okanye sigxininise ukuba i-chiaroscuro yefoto ethathwe nge-smartphone yethu okanye i-Nikon, inyani yokuba nochungechunge lwezinto ezisetiweyo zisenza umsebenzi wokuvelisa Kulula kakhulu.
Kulapho iiseti ezingama-620 zeLightroom zingena kule pakethi yeKrisimesi. Umbono wazo zonke Gxininisa ezo foto zeKrisimesi Ke ziyabengezela ngakumbi kwaye zibeka oko kuchukumiseka komlingo kunxibelelene nale mihla. Sineentlobo ngeentlobo zazo kwaye apha unokufumana umfanekiso obonisa utshintsho olukhulu olwenziwe ukusuka "ngaphambili" ukuya "emveni" kwezinye zezo zisetiweyo zeLightroom.
Masithi ukucwangciswa kwangaphambili okanye amacebo okucoca ulwelo kwenziwe loo foto yeKrisimesi jonga ngcono kakhulu. Kuya kufuneka uzame phakathi kwezimbalwa kude kube ufumana eyona ilungele loo foto.
Olunye useto lwangaphambili olunakho gcwalisa ngokugqibeleleyo ifoto ukunika ulungelelwaniso olungcono Faka umbala okanye ubalaselise i-halo yemilingo yezibane ezihombisa imithi yethu yeKrisimesi. Kukho zonke izizathu, ke le yenye yezona ndawo ziphambili zale pakethi yeKrisimesi onokuyifumana nge $ 19. Isibonelelo esikhulu sokwandisa umxholo wakho okhethekileyo ngeli xesha lonyaka.
Kwaye awunakuphoswa ipakethe yolu hlobo yintoni amahlwantsi ekhephu. Ukuwa kweekhephu kulungele nawuphi na umsebenzi woyilo kwaye sihlala sizifuna ngeendlela ezahlukeneyo, imibala kunye noyilo.
Lilonke zizinto zonke Amaleya angama-250 amahlwantsi ekhephu sinawo kulepakethi enkulu yeKrisimesi. Babonakaliswe kwisisombululo se-5.000px X 3.325 px ngobunzulu be-300dpi. Oko kukuthi, ziya kujongeka zibukhali ngokugqibeleleyo ukuba sizisebenzisa kwii-pixards ze-pixel ezingama-800 x 600. Zikwakhona ngemibala emi-5 ukuze ukwazi ukuzidibanisa kunye nemisebenzi oza kuyenza kwezi ntsuku zeKrisimesi.
Njengoko ubona kwiifoto esabelana ngazo bayoyika kulowo nalowo kubo. Ke lelinye lawona manqaku aphambili ale phakheji enkulu.
Imvelaphi yeKrismesi engama-260
Ngoku sijikela kwi uthotho lweemvelaphi ezinemibala eqaqambileyo kule Krisimesi. Zizonke zingama-260 kwaye sizifumana kuzo zonke iifom ezinokwenzeka, uyilo kunye nokudityaniswa okukhulu kwemibala ukutsala umdla wabo bafumana ikhadi lethu lokubulisa ngeKrisimesi.
Inyani yile yokuba inereferensi enkulu yokuba inemali ethile apho iimodeli zivela khona, ke kuloo misebenzi apho kufuneka sibonakalise umsitho okanye itheko leKrisimesi, zingaphezulu kokufanelekileyo. Njengawo wonke umxholo, akhona kwisisombululo esiphakamileyo kwaye achazwe ngokugqibeleleyo; kwimeko apho nantoni na ekufanele ukuba ibifanele ukuba isiwe kumatshini wokushicilela kwaye ibonwe loo powusta yenzelwe thina kumnyango wangaphambili weqela elithile okanye iqela lendawo.
Amacwecwe eKrisimesi ali-100
Ezi ntloko zeKrisimesi zinefuthe elihle ngokuba lilodwa. Ngaba ngokungathi ukupeyinta ngebrashi apho ikhephu yayizizinto zokuzoba kunye nokupeyinta, ukuze ufumane umbono wokugqiba okukhulu.
Oo bumba bakhona ngazo zonke iindlela ezinokubakho kwaye abaninzi bade bamele oonobumba ukuze umbulelo kubuchule bethu bokuyila singayinika indawo kulawo makhadi emibuliso okanye kwiposta yeKrisimesi yokuphela konyaka.
Isisombululo sithi I-4.500 px x 4.500 px ngobunzulu be-300 dpi.
Imithi emincinci engama-25 yeKrisimesi
Olunye uluvo olukhulu oluqhutyelweyo kunye nale phakethe kukudityaniswa Imithi encinci yekrisimesi. Yimithi ye-3D elinganisa imvelaphi kunye nezithunzi kunye noyilo oluncinci. Ingathi umyili wefanitshala omkhulu uthabathe inkqubo efana neMaya kwaye wachitha ixesha elungileyo esenza oko akuqondayo njengomthi okhethekileyo weKrisimesi.
Ukuba ujonga into ekhethekileyo neyahlukileyo kwikhadi lokubulisa elifuna ukuzinikezela kwakho, le mithi mincinci engama-25 ingaphaya kokugqwesileyo. Sithetha ngeefayile zePSD ngesisombululo se- Iiphikseli ezingama-4.650 x 3.125 px kunye nobunzulu be-300DPI.
I-PSD yeKrisimesi eyahlukileyo
Olunye uyilo olwahlula le pakethi zezi fayile ze-5 zePSD ezinokuhombisa ngokugqibeleleyo ezinye zezo venkile sizilindeleyo ngeli xesha ukufumana isipho esahlukileyo. Iphantse yaba Iresiphi yeMuffins iswekile ngokupheleleyo kwaye imibala epinki kunye ne-pastel ibalasele kumbala wabo wombala.
Zenziwe kwi-3D, ke zinjalo inikezwe ngobunyani obukhulu. Oko kukuthi, singazidibanisa ngokugqibeleleyo kunye neefoto eziyinyani apho sinento yokuhombisa okanye ikhitshi lethu njengeyona nto iphambili. Ukugqitywa okuhle kwaye oko kongeza umgangatho omkhulu kwiseti yonke yale pakethi yeKrisimesi.
Iikhephu zekhephu ezingama-24
Olu luhlu lwamahlwantsi ekhephu luphawulwa ngezinto: ubhedu. Kwaye inyani kufuneka ithethwe ukuba inobukhazikhazi obukhulu nge-serious ye ukubetha ngokuqaqambileyo imibala yobhedu.
Enye iseti yeekhephu ezongeza uninzi lomgangatho kwiseti iphela ngokwayo. Ngaba Ama-snowflakes angama-24 eemilo ezahlukeneyo, ubukhulu kunye noburhabaxa, nangona bonke benalo ngongoma idibeneyo iyibhedu. Ukuba singazidibanisa nezinye izinto zokuhombisa kungakhokelela kwikhadi lokubulisa elahlukileyo nelikhethekileyo, ke masisebenze kuyo kancinci.
Iikhephu zegolide ezingama-24
Umahluko omkhulu kunye nepakethi yangaphambili zizinto ezimelweyo: igolide. Zibonakaliswe ngemilinganiselo ye-6.500 px X 6.500 PX kunye nobunzulu be-300 DPI.
Uyilo lwabo luhle kakhulu kwaye bayakwazi ukuba zezo ntaka zekhephu nazo uhombise ezinye zeempawu zekrisimesi. Iya kuba nguwe ukwazi ukuba ungayifumana njani indawo efanelekileyo yokuhombisa umsebenzi wakho kubathengi abahlukeneyo.
Grunge kunye nekrisimesi yentsimbi
Njengakwezinye iipakethe esize nazo kule migca ngamanye amaxesha, Sineepakethe ezimbini ezinxulumene negrunge kunye nesinyithi okanye isinyithi esinzima. Ziye zahlulwa ngokwenziwa kwazo ezisetyenziswayo kunye nezixhobo ezityibilikayo ezinikezela ngezinye iintlobo zentetho. Enye into eyongezelelweyo enkulu kule pakethi yeKrisimesi ayinakuphoswa ukuba sinazo i $ 19 ibiza.
Kwisandle esinye I-24 4.500 x 4.500 px grunge snowflakes, Ubunzulu be-300DPI kunye nemibala emi-4. Ngelixa intsimbi inyuka iye kwi-4.000 x 4.000 pixels nge-300DPI ngokunzulu. Ewe, ikwayi-4 imibala eyahlukileyo kwaye uyisebenzise ngendlela efanelekileyo kuthi.
Amaqhekeza ekhephu ahlukeneyo
Sigqibile ngolunye uthotho lweepakethe zekhephu zisuka kwezo zimhlophe zicocekile kwabo babetha ngakumbi kwaye badla ngokuba nolwazelelelo olukhulu kwezo zimvo zeKrisimesi. Kukho abanye abamnyama xa kunokwenzeka ukuba sinesihlobo esivula iifilimu zikaTim Burton.
Ukuba ubuthandile ubutyebi ungathenga ipakethe yonke nge-19 kuphela esi sixhobo
Ngamafutshane, a ipakethe enkulu yezinto zeKrisimesi esingasayi kuphoswa yiyo nantoni na ukuhombisa konke oko kuvuyisana, loo maphepha anokuhambisa nawo izipho zamaphepha okanye loo powusta apho ugxa wakhe afuna ukuba umbhiyozo uzakuba pete ukuphela konyaka. Ukuba ufuna ukuba noluhlu olubanzi lomxholo kumxholo wakho kwaye ube bhetyebhetye ngakumbi, le pakethi ibalulekile.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » Izibonelelo » Ngaphezulu kwe-18.00 izinto zekrisimesi zoyilo lwakho ze- $ 19 kuphela!
Fumanisa ukuba yeyiphi imibala yemibala yakho yePantone 2019 enaleli phepha lemibuzo